China abantwana siko umgangatho iiyunifomu cotton pique ihempe mveliso kunye nabenzi | Umbono
abantwana siko umgangatho ihempe ihempe polo ihempe
Nxiba umntwana wakho ulumke okrelekrele ngehempe yabantwana bethu kwaye ubonise indalo yakho emangalisayo ngokwenza ipolo ngezinto oyithandayo kunye neefoto.
Iikhati zethu zepolo zabantwana zilungele uluhlu lwabantwana abakhulu abaneminyaka yobudala kwaye zilungele ibala lokudlala, ibala lezemidlalo okanye ukunxiba kwesikolo. Ifaka amaqhosha ama-2 kwaye yenziwa nge-100% ye-pique yomqhaphu le polo ikrelekrele, intofontofo ijongeka ilumkile unyaka wonke. Yila iihempe zakho zabantwana ngokulula ngokongeza isicatshulwa esifanelekileyo, iifoto okanye uyilo!
Kuthetha ukuba ufumana okona kulungileyo kuwo omabini la mazwe! I-polo entsha yolutsha ekhangelekayo eya kuthi iqela lakho liyakuthanda ukuyinxiba.
Ubungakanani Ubude bomzimba Isifuba Ubude bemikhono
Egqithileyo Ihowuliseyili sweatshirts zabantwana ezihonjiswe ngomntu ezingenakulinganiswa zepullover hoodie
Okulandelayo: Umphezulu wetanki
Ihempe zabantwana zePolo sleeve emfutshane
Ihempe yePolo yombhoxo
Tennis Polo ihempe